फुर्सद छैन जिन्दगीमा ? — Hamro Sanchar
फुर्सद छैन जिन्दगीमा ?
हरि बानिया प्रकाशित : २०७४/९/२९ गते
जिन्दगी आफ्नै हो । समय पनि आफ्नै । स्वतन्त्रता त झनै आफ्नो तर फुर्सद छैन ।’
फुर्सद के कामका लागि, अनि कसका लागि भनेर पनि तय हुन्छ । आफूलाई मन पर्ने मानिस अनि फाइदा हुने कामका लागि हामीसँग फुर्सदै फुर्सद हुन्छ । आफूलाई मन नपर्ने मानिस अनि फाइदा नहुने कामका लागि हामी व्यस्तै व्यस्त । कैयौँपटक त हामी आफ्नै लागि पनि बेफुर्सदी भैदिन्छौँ र पो ! हामीभित्रको अर्को मानिसले कैयौँ कुराको रहर गरेको हुन्छ । हामी ती रहरलाई यसरी कुल्चन्छौँ, मानौँ आफ्नो नभएर अरू कसैको रहर हो त्यो । हामीभित्रको अर्को मानिसले हामी हिँडिरहेको बाटो मन पराइरहेको हुँदैन, तैपनि हामी अटेर गरेर हिँडिरहन्छौँ र पो ! हामीभित्रको मानिस तिर्खाइरहेको हुँदा, उसको आँत हामी निरन्तर सुकाइरहन्छौँ र पो !
एउटा औसत मानिसको दिन अफिसको टेबल, फाइल, फोन कल, मिटिङ तथा हाकिमलाई रिझाउनुपर्ने बाध्यतामा बित्छ । कति सुन्दर देखिएको छ, थाहै हुँदैन । पाँच मिनेट आफैँलाई समय दिएर त्यो सुन्दरता हेर्ने फुर्सद हामीलाई कहाँ ! दस मिनेट कुनै पार्कमा बसी त्यहाँ आफ्नै दुनियाँमा मस्तसित खेल्ने केटाकेटीहरूको खुसी देखेर खुसी हुने फुर्सद हामीसँग कहाँ ? व्यस्तताको खाल्डोमा अस्तव्यस्त बोझले पुरिएर बित्न आँटेको जीवनलाई एक पटक पाँच घण्टा उकालो चढेर हेर्दा त्यही खाल्डो कति सुन्दर देखिन्छ भनी हेर्ने फुर्सद हामीसित कहाँ ? घरबाट बाहिर निस्कँदा हामी बादलको आकार हेर्न भ्याउँदैनौँ ।